Akụkọ - Nnukwu ahụike! 5g na -ewu ewu, ngwaọrụ njikwa ahụike nwere ọgụgụ isi na -emepụta “dọkịta” nke gị.
Ihe mkpuchi eletriki
Robot na -akpachapụ anya
Ịhịa aka n'ahụ oche
Ike ụlọ ọrụ
Akwa ahụike! 5g na -ewu ewu, ngwaọrụ njikwa ahụike nwere ọgụgụ isi na -emepụta “dọkịta” nke gị.
N'ime afọ a "ezumike oyi kacha ogologo na akụkọ ntolite", ndị enyi m niile mụtara n'onwe ha "klaasị mepere emepe ahụike". Klas a abụghị naanị mụrụ "ahụike igwe ojii", "mgbatị ahụ ụlọ" na isiokwu ndị ọzọ na -ekpo ọkụ, kamakwa ọ mere ka nlebara anya ndị mmadụ ka mma na ahụike ha. Ọ dị iche na njakịrị nke "usoro Buddha" n'oge gara aga, a na -enwe ọtụtụ ndị enyi na ndụ anyị kwa ụbọchị na -eji mgbatị ahụ na mgbatị ahụ na akụrụngwa nwere ọgụgụ isi nyochaa ahụike anyị.
N'aka nke ọzọ, ngwaike nwere ọgụgụ isi nke bụ isi ọrụ ahụike na -abawanye. Ngwaahịa ụfọdụ aghọọla ngwa ọrụ dị egwu maka ndị nkịtị inyocha ahụike ha. Elekere Smart, dị ka elekere apple, nwere ECG. Ekwentị mkpanaka Huawei P40 PRO + nwekwara ike iji igwefoto azụ were tụọ okpomọkụ ahụ nke ọma site n'enyemaka nke pụrụ iche AI ​​algorithm ... Nlekọta ahụike, nke bụ naanị site na ngwa ọrụ ahụike ọkachamara na -achọpụta, yiri ka ọ na -enweta site na ngwaike smart dị ka. dị ka ekwentị mkpanaaka, elekere na ọbụna ekwe ntị.
Enwere ike ibu amụma na site na -aga n'ihu na -aga n'ihu na usoro 5g, ngwaike nwere ọgụgụ isi ahụike ga -amalite nkwalite mgbagha. Ugbu a, site na iji elekere elele ọnụego obi, enwere ike iji nleba anya na njikwa ọrụ nwekwuo ike na ekweisi ma ọ bụ ọbụna ibe n'ọdịnihu, iji wee belata ọnụ ụzọ maka ndị nkịtị ịghọta na nyochaa ahụike nke ha. N'echiche, anyị nwere ike nyocha anụ ahụ n'ụlọ na -ahapụghị ụlọ.
Dị ka o kwesịrị ịdị, echiche dị otú ahụ mara mma enweghị ike ikewapụ ya na nkwalite ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ. Dịka ọmụmaatụ, n'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ mgbawa kacha elu n'ụwa, Qualcomm, na JD a ma ama akwalitela nkwado ha n'ọhịa 5g. N'ịdabere na mmepe ngwa ngwa nke ihe owuwu 5g nke China, JD na Qualcomm kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka mgbasa ozi na mgbasawanye nke ngwaọrụ nwere ọgụgụ isi 5g dị na China. Na mgbakwunye na -aga n'ihu na -eme ka ngwaike smart dị ka ekwentị smart, XRS, PC PC na ngwaọrụ wearable na oge 5g, ha ga -enyekwa ohere zuru oke maka uru ha dị iche iche iji mepụta ngwaike smart 5g nwere ọnụ ala na arụmọrụ siri ike. E kwuwerị, naanị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ị nweta ya ma jiri ya, ka enwere ike were ya dị ka mgbasa ozi nke ọma.
Oge ezipụ: Aug-05-2021
Adress:B25, ogige ụlọ ọrụ carbon dị ala, 400 Xincheng Okporo ụzọ, District Zengcheng, Guangzhou
Mgbaji nke ọgụgụ isi Alexa, Oche ịhịa aka n'ahụ Zero, Sweep Robot Vacuum Cleaner, 2021 kacha mma nhicha robot, Robot Office Kitchen Recharge na -akpaghị aka, Robot Wet Na Akọrọ,